डायना एउटा सानो व्यवसाय withणको साथ पुच्छर मिल्छ
lending8 मा जुन 22, 2015 द्वारा लिखित।
डायनाका लागि कुकुरहरू प्रेम र फ्लफको साना बलहरू भन्दा धेरै बढी हुन्छन्
मेक्सिकोमा हुर्केकी, डायनाकी आमाले कुकुरहरूसित व्यवहार गरे जसरी उनीहरू आफ्नै परिवारका सदस्यहरू थिए। तर १२ वर्षको उमेरमा डायना सान फ्रान्सिस्कोमा बसाइँ सरेपछि उनको परिवारमा कुकुर बस्ने ठाउँ थिएन। उनी त्यस दिनको लागि उत्सुक थिइनन् जुन उनले पारिवारिक कुकुरलाई फेरि आफ्नो जीवनमा ल्याउन सक्छिन्, तर कलेज पछि त्यो त्यस्तो सपनालाई पूरा गर्न सक्षम भएन।
सिटी कलेजमा इन्टीरियर डिजाइन अध्ययन गरेपछि डायनाले आफ्नो गृह जीवन गृहसँगै शुरू गरिसकेकी हुन्। यो इनामदायी थियो किनकि उनले कुनै पनि घरलाई कलाको काममा परिणत गर्न सक्छिन्। उनी दिनहुँको भान्छा लिन सक्छिन् र यस्तो लागी बनाउँछिन् कि यो फेन्सी कुकि show शोको सेट हो, वा बैठक कोठाले आरामदायक र घरैदार देखिन्छ केवल फर्नीचर र प्रकाश व्यवस्था गरेर।
२०० 2008 मा जब आवास बजार दुर्घटनाग्रस्त भयो, कसैले पनि घर बेच्न खोजिरहेको थिएन, कसैलाई भाँडामा राख्नुहोस् कि यो राम्रो देखिन्छ। क्र्यासले उनलाई जागिर बिना छोडिदियो र उनलाई करियरको ट्रैजेक्टोरीमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्‍यो। डायनाले आफ्नो बाल्यकालका सम्झनाहरूलाई फर्केर हेरिन।
डायना भन्छिन्, “मलाई पशुहरू मन पराउँछन्, तर मैले उनीहरूमा क्यारियर नै भएको मैले सोचेको थिइनँ।
डायनाले जोखिम लिने र नयाँ पेशामा लाग्ने निर्णय गरे कुकुर डेकेयरमा काम शुरू गर्न। उनी आजीवन घरपालुवा जनावर भएकी थिइन, र मायालु आमा जस्तो उनको फ्रान्सेली बुलडगमा डेटि .्ग गरेकी थिइन, तर उनले व्यावसायिक रूपमा यस्तो जस्तो कहिले पनि गरेको थिएन। तर उनले काममा केही सीमितताहरू छिट्टै याद गरिन्।
उनी जनावरहरूसँग काम गर्ने हरेक मिनेटलाई माया गर्थिन्, तर लामो घण्टा, कम तलब र सीमित अपवर्ड गतिशीलताबाट उनी निराश भइन्। नतिजाको रूपमा, डायनाले आफ्नै मालिक बन्ने तरिकाहरूको खोजी गर्न शुरू गरे र कुकुर हिंड्ने व्यवसाय खोलेको ठाउँमा उनको दृश्यावलोकन गरे।
डायना एक बैंक मा जान र व्यापार getण लिन चाहन्थे, तर उनी सकेनन्। यद्यपि उनी अमेरिकामा बसोबास गर्छिन्, कलेजको स्नातक थिइन र पूर्ण समय जागिर खाए पनि उनीसँग कुनै क्रेडिट स्कोर थिएन।
"एक पटक मलाई थाहा थियो कि म व्यापार शुरू गर्न चाहन्छु, त्यहाँ फर्केर आउँदैन।"
उनीले एक स्थानीय नाफारहितको बारेमा सुनेकी थिई जसले उसलाई साथी मार्फत व्यवसाय योजना बनाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ र उसले कुकुरलाई जमीनबाट पैदल यात्रा गर्न सकी। व्यवसाय योजनाले उनलाई सिकाएको एउटा चीज उनको आला कसरी पत्ता लगाउने। डायनाले निर्णय गर्‍यो कि उनी केवल सामान्य कुकुर पैदल यात्रा गर्न चाहँदैनन्। यसको सट्टा, उनी जनावरहरुप्रतिको उनको मायालाई इको-मैत्री मूल्यहरु संग जोड्न चाहन्थिन्। उनी यो निश्चित गर्न चाह्छिन् कि उनीको व्यवसायको हरेक अंश पर्यावरणमैत्री थियो - जैविक व्यवहार र कुकुरहरूले खाने भोजनबाट, टिकाऊ खोर्स्याउने खेलौनाहरू, र जैविक बिभिन्न ब्याग झोलाहरू पनि।
छ महिना भित्र, उनीसँग उनको व्यवसाय इजाजतपत्र थियो र हरियो शहरी कुकुर जन्मेको। अब जनावरको स्याहार प्रदान गर्न मान्यता प्राप्त, उनको इको-मैत्री सेवाहरू २०१२ सम्ममा जान तयार थिए। अर्को अवरोधहरू उनको क्रेडिट स्कोर बनाउँदै थिए, थप प्रशिक्षण लिई र ग्राहक आधार निर्माण गर्दै थिए। उनको उधारो निर्माण गर्न, उनी १टीपी T टीमा सामेल भए, जहाँ उनी शुन्य देखि 5050० भन्दा बढीमा केही महिनामा गइन्। त्यसपछि उनले R 56 घण्टा भन्दा बढी प्रशिक्षण प्रशिक्षण खर्च गरे र डोरीहरू सिक्न कुकुरहरू हिंडे। र २०१ 2013 को अन्तमा, उनी आफ्नो पहिलो ग्राहक अवतरण गर्न सक्षम भएकी थिइन्। तर उनी आफैंलाई ग्रीन अर्बन डग भन्नु भन्दा पहिले उनलाई पार गर्न अन्तिम बाधा थियो।
डायनाको अन्तिम बाधा उनको ग्यास गुजलि car्ग कार थियो।
"म शहरमा कुकुर ढुवानी गर्ने ग्यासमा मात्र हप्तामा १ टीटी २ टी2० खर्च गर्दैछु," उनले भनिन्। उनीलाई थाहा थियो कि उनी पैसा बचाउन सक्छिन् र पूर्ण रूपमा हरियो एक संकर वाहन खरीद गरेर उनको व्यापार। जे होस् डायनासँग अहिले क्रेडिट स्कोर छ र incomeणमा मासिक भुक्तानी गर्न पर्याप्त आम्दानी छ, उनको स्कोर अझै प्राइमभन्दा कम थियो र त्यसैले उनी कारको लागि अटो लोनको लागि योग्य हुन सक्दिनन्।
डायना एमएएफमा फर्केर आई किनभने उनले एक प्रोग्रामको बारेमा सुनेकी थिइन जसले ब्यापार मालिकहरूलाई शून्य-ब्याज सानो व्यवसाय loansण प्रदान गर्‍यो। एमएएफको सहयोगमा डायनाले उनको व्यवसायको लागि माइक्रोरोन प्राप्त गर्‍यो। उनी वरिपरिका कुकुरहरुलाई गाडी चलाउन प्रयोग गरिएको, उर्जा कुशल कार किन्न सक्षम भइन्। त्यसबेला देखि, डायना लेण्डि C सर्कल फर बिजिनेसको सदस्यता लिएको छ कि उनिले आफ्नो क्रेडिट निर्माण गरिरहेकी छ ताकि भविष्यमा उनीहरु बैंकबाट ठूलो loansण लिन सक्नेछन्।
अब १२ पूर्ण-समय ग्राहकहरूको साथ, डायनाको व्यवसाय छिटो बढ्दैछ। उनी छोटो नाकका ब्रीडहरू जस्तै अंग्रेजी र फ्रेन्च बुलडगहरूसँग काम गर्नमा माहिर छन् - यस्तो रणनीति जसले उनलाई वफादार र दीर्घकालीन ग्राहकहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। उनी पपुहरुका लागि "छोटो-नाक साहसिक क्लब" पनि चलाउँछिन् जसले छोटो नाकका जातहरूका लागि डिजाइन गरिएका गतिविधिहरू प्रदान गर्दछ।
"म सबैलाई भन्छु जुन म जान्दछु, 'एक सानो व्यापार loanणको लागि Mission Asset Fund मा जानुहोस्।"
शून्य ब्याज व्यवसाय gettingण लिने अवधिमा दीर्घकालीन क्रेडिटको निर्माणले ठूलो बृद्धि गरेको छ। महत्वाकांक्षी व्यवसाय मालिकहरूलाई डायनाको सल्लाह? त्यसको लागि जानुहोस्! जहाँसम्म सडक कडा र डरलाग्दो हुनेछ, उनको विश्वास छ कि "सूर्य सबैका लागि चम्किन्छ" जबसम्म उनीहरूको सपनातिर काम गर्छन्।
के तपाई साना फ्रान्सिस्कोमा डायना जस्तो सानो व्यवसायको मालिकलाई चिन्नुहुन्छ? तिनीहरूलाई आज साइन अप गर्न भन्नुहोस् LenderCircles.org.